[nampiana] Ry mpitari-tolona isany Ã´! Aza simbÃ na re ny tolona e! | Hevitra MPANOHARIANA |
[nampiana] Ry mpitari-tolona isany Ã´! Aza simbÃ na re ny tolona e!
2009-05-23 @ 21:15 in Politika
Dieny mbola Asabotsy alina izao, ary mbola misy ny alahady ahafahana mifampita hafatra tsara, dia ampitaina amin'ny rehetra ny hafatra napetraky ny filoha Ravalomanana, ka ampitaina tsara amin'ireo mpitari-tolona ho fantany tsara fandrao diso fihaino na tsy nandre tsara ny tenin'ny filoha Ravalomanana nanoloana ny mpanohana azy sy ireo mpandala ny ara-dalàna teny amin'ny Auditorium io sabotsy 23 mey io ry zareo. Nandaniako fotoana mihitsy ny namadika azy an-tsoratra ary mety misy ny fomba ahafahanareo mpamaky eto an-tserasera mihaino azy koa; dia tsakotsakoy tsara izay voambara fa aza ahodikodina intsony ny resaka.
Ny kabarin'ny filoha Ravalomanana
Ry vahoaka marobe tokoa, miarahaba anareo amin'ny foko manontolo mihitsy aho. Tsy ho ela intsony dia ho tonga eto Madagasikara aho fa aza matahotra ianareo. Ny zavatra anankiray tiako horesahina sy lazaina aminareo dia izao : iarahantsika mahita tsara ireo mampiady sy sy manankorontana ary mampivahavaha ny fifampatokisana, fa minoa ianareo ahy fa ny zavatra resahiko sy ny zavatra ataontsika tsy maintsy mipetraka amin'ny fifampatokisana tanteraka, noho izany rehefa misy mitady hampizarazara ny tolona ataontsika, aza manaiky izany ianareo fa izay teneniko anareo fa tena manohana sy miady hatramin'ny farany ary amin'ny fo manontolo, io ihany no marina.
Maika dia maika ny ezaka ataontsika sy ny tolona ataontsika ary ny fitakiantsika ny ara-dalàna dia Miantso anareo aho, ary milaza aminareo mba hiray hina tsara, ary ho hita ihany ny olona mivadika palitao... (tsy heno tsara fa lasa tombandresaka na teny manakainy ny anaty fononteny: ho hita ihany ireo olona nivadi-dela hatramin'izay)...Matokia ianareo ahy. Matoky ireo solombavambahoaka izay miaraka amintsika sy manao araka izay azo atao sy ireo mpitolona miaraka amintsika rehetra aho, matoky an'izy ireo aho.
Ny zavatra tiako horesahina ho henon'ireo vahoaka marobe ireo, ianareo milaza sy mandeha mankany amin'izay hoe négociation : Tsy mila mi-négocier amin'izany hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra takiana vahoaka. (Fa ny zavatra tokony hifanaraka dia hoe) ahoana no ahatongavana haingana miverina aty Madagasikara ahafahako mitarika sy mampandroso ny firenentsika, miaro ny vahoaka amin'izao fampihorohoroana izao. Tena maha-te-hidera sy mahavaky vava ny olona rehetra erantany ny fitiavan-tanindrazana asehonareo amin'izao fahatongavanareo isan'andro isan'andro izao. Tohizo, tohizo hoy aho aminareo, [tsy heno tsara eto: ireo firenen-drehetra] (...) izay manampy sy manohana antsika hatramin'ny farany mba hiverenan'ny ara-dalàna; ka aza manaiky hosaratsarahina na ravaravan'ny sasany fotsiny fa misy ny mihatsaravelatsihy, misy ny mivadibadika, ary misy dia misy tokoa ireo mila [ranondranony angamba ny saiky holazainy fa niova tampoka ny fitohizanteny] fitiavantena, ireo tia kely ka tsy hijery afa-tsy ny azy ihany.
Henoy tsara ny kabary nataoko ho ren-tany ren-danitra tamin'ny teny anglisy, teny frantsay ary teny malagasy fa mitaky ny hamerenana ny ara-dalàna ny vahoaka malagasy ary mitaky tsy misy hatak'andro ny hamoahana ireo mpiara-mitolona amintsika satria tsy ara-drariny ny hanagadrana azy. Ary mitaky indrindra indrindra ny fahafahana maneho hevitra na oviana na aiza na aiza ny toerana hanaovana izany. Ry vahoaka Malagasy, firenena manana ny maha-izy azy ny firenentsika, manana ny fiandrianany ary indrindra indrindra manana ny Lalampanorenany. Tsy maintsy ataontsika, antsoina izao tontolo izao hanampy antsika hiverenako eto Madagasikara. Minoa ianareo ahy fa tsy adala ireto vahoaka ireto (tapaky ny horaka:) Amin'izao iresahako mivantana amin'ny vahoaka izao, ho anareo mpanao hoe négociation ireo : tsy ilaina ny ifampiraharahana izay olona tsy hita izay nataony [Aza mankany fa miala maina any] fa aoka izay! lany andro fotsiny. Ahoana ny mbola hanekentsika ny hanohizana ny fifampiraharahana nefa ireo namantsika gadraina, ireo olona samborina, ary indrindra indrindra ny iverenako any mbola sakanan-dry zareo. Inona no tokony ifampiraharahana amin'ireo? Ho hitantsika vahoaka izay azo atao mba hihaonana indray fa minoa ianareo ry vahoaka, matokia ianareo fa tsy maintsy manao izay rehetra azoko atao aty miaraka amin'ny firenen-drehetra aho, ny SADC, ny African Union mba hahatonga antsika hihaona indray mba hametraka amin'ny toerana maha-izy azy an' i Madagasikara. Fa dia faly aho afaka milaza aminareo androany, faly aho afaka mitafa sy midinika aminareo, ary indrindra indrindra faly aho mahita anareo tonga marobe toy izao. Fitiavan-tanindrazana izao ary horaiketin'ny tantara rahatrizay. Koa dia minoa ianareo fa tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra fa manampy antsika.
Koa dia mahereza, manàna faharetana fa ho avy i dada. (horaka tsy ifandrenesana tohizan'ny olona hoe : Any amin'i dada ny lakile). Ary amin'izao fotoana izao mbola milaza ihany aho, satria ireo mitarika sy milaza fa hoe manankevitra ny hisian'ny hivoaran'izao fahasahiranana ara-politika eto Madagasikara izao. Raha mbola tsy manampy amin'ny famerenana an'i Madagasikara [ho any amin'ny ara-dalàna angambany tokony ho tohiny] izy ireo dia ho lany andro fotsiny, satria ny anton'ny nahatonga ny olona hivory isan'andro isan'andro eto amin'ny Magro sy amin'ny toeran-kafa dia mitaky ny hiverenako, hamerenana ny ara-dalàna manaraka ny Lalampanorenana, ka ireo olona tsy momba an'izany dia tsy namantsika izany. Ka dia hoy aho aminareo hoe : Fantatra ary miseho ireo olona izay tia tena mitady seza fotsiny ary hita eny ihany koa ireo olona tsy matahotra ary tsy mieritreritra mihitsy ny ain'ny sasany, ny fijalian'ny hafa, fa dia mbola mpitahorina sy rahonana. Alaina ny fananany any an-tokantrano. Atao izay hampijaliana azy amin'ny alalan'ny vady aman-janany na amin'ny alalan'ny tenany. Takiantsika aloha ny amoahana ny praiminisitra miaraka amin'ireo parlemantera, Takiantsika ny ahafahana milaza an-kalalahana ny safidin'ny vahoaka. Takiantsika ny hiverenako haingana sy maika any Madagasikara. Minoa ry vahoaka Malgasy, minoa ahy ianareo fa tsy ho ela ho'aho isika manao izany, ary homba antsika mandrakariva Andriamanitra. Ka dia mametraka ny veloma, Mandra-pihaona indray fa mbola hiresaka aminareo aho amin'ny manaraka indray, fa manaova foana ny hetsika ataonareo ... Samia ho tahian'Andriamanitra.
Ny nanohizan'ny depiote Yves Aimé Rakotoarisoa (Mémé) azy
Notohizan'i Meme izay tapaka kabary noho ny antson'i filoha ny resaka ary nanao karazana famintinana sy manambara izay tokony hataon'ny delegasiona manaraka indray izy: Eny ary, Mazava izany ny tenenin'ny prezidà izay filoha mpitarika antsika teo fa raha tsy ny fiverenany, ny famoahana ireo namantsika izay nosamborina (dia) tsy misy dinika intsony fa miala an-databatra. Izahay koa dia efa ela no saiky haka izay fanapahan-kevitra hoe hiala ambony latabatra, ka dia izao : ny fifamotoana napetraka taminay talohan'ny nitenenko teo izay notenenin'ny prezidà ho mitohy ny fisamborana sy anona dia izay izany no tenin-dry zareo, ka ny angatahinay koa dia ry zareo nametraka ny hoe tsy azo atao ny mamoaka ivelan'ity efitrano ity ny dinika, ka izay no itenenako amintsika hoe miala eto dia tsy manao tatitra mihitsy fa dia hanatanteraka ny fitakian'ny vahoaka sy ny hafatry ny filoha Ravalomanana ka araka ny nambara teo dia efa izy tenany no niteny. Ny voalohany izany vao miditra ny efitrano dia efa tenenina ny hoe: Hampiverina an'i dada ve ianareo sa tsy hampiverina? Dia raha mandeha ny adihevitra ka tsy miroso mankany amin'ny tenin'ny filoha teo dia tsy mankeo an-databatra intsony izahay. Iray izay.
Faharoa, dia hoe ahoana ny amin'ireo namanay izay migadra? Satria ny teneninareo teo dia hoe ny aty ivelany no tsy samborina intsony sy tsy kitikitihina fa hoe ahoana ireo efa any? Dia avoaka koa izany ireny fa raha tsy izay, tanterahina araka ny teniny teo ihany satria teo dia nilaza ny prezidà Ravalomanana dia manao marche arriere koa izahay, miala eo ambony latabatra.
Eo anatrehan'izay anefa, araka ny hafatro tamin'ny voalohany... dia miatrika izay amim-pahamalinana isika ary miatrika izany koa amim-pahamendrehana. Tapitra hatreto ny teniny noraisiko.
Fanamarihana avy amiko mpamaham-bolongana
Efa nilaza ihany ny filoha hoe tsy misy ny dinika atao raha tsy efa tonga eto an-toerana ny tenany. Gaga ihany anefa ny tena raha nahita fa mbola nandehanana ihany ilay dinika efa noraràna tsy ho aleha. Namboamboarin'ny depiote Andrianatoandro Raharinaivo moa ny resaka ka nataony hoe: tsy dinika no ataonay fa "dinika savaranonando". Na inona na inona filaza azy efa misy teny hoe dinika ihany ao, ary efa fantatra ihany ny hafetsifetsen'ny sasany sasany ka andrao voafandrika any, araka izay efa nosoratako teto omaly ihany ka mamily ny resaka sahady vao eny ampanombohan-dresaka. Efa nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana ny tsy tokony andehanana midinika tamin'ny zoma heriny (15 mey 2009) nefa dia hitantsika moa ny tohiny fa nisy naditra tao.
Ny antony mbola tsy ilàna ny dinika dia noho ireo olona mbola voasambotra noho ny antony politika mazava be. Raha mandeha ny dinika nefa ireny tazonina any dia toa tsy firaharahiana azy ireo izany. Misy amin'izy ireny manko ny tokony hisolo tena amin'izay dinika tokony atao nefa sakanana. Ankoatra izany, mbola misy koa ireo olona voatery miafina noho ny fandrahonan'ny miaramila azy ireo, nefa mety misy tokony hisolo tena ny mpanaja ny ara-dalàna amin'izay dinika tokony atao koa izany. Misy izany ireo tokony hisolo tena no alombona ankolaka ny vavany. Tsy mampitombina loatra ny fifampidinihana izany.
Notenenin'ny filoha mazava tsara tamin'ity sabotsy 23 mey ity, na dia somary takon'ny horaky ny olona aza ka izay no amerenako azy an-tsoratra, fa tsy mila mankany amin'ny fifampidinihina mihitsy ny solontena. Izany hoe tsy ilaina akory ny miditra ny efitrano hanaovana ny fifampidinihana ka mangataka fepetra na manontany ireo hafa ao amin'io efitrano io fa miandry am-pilaminana miaraka amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny mpitari-tolona sy ny solontena rehetra tokony ho any. Koa miangavy re! ampitampitao any amin'ny rehetra any ny hafatry ny filoha, ry mpanohana ny ara-dalàna. Aoka tsy hanatrika izany fifampidinihana izany mihitsy ianareo fa maro ny tokony ho solontenantsika amin'izay mety ho dinika no mbola tsy tafiditra eto Madagasikara, mbola notazonina any am-ponja, ary mbola miafina noho ny fandrahonana isamborana azy. Nandray ny andraikitro aho tsy hanimba ny tolontsika mpandala ny ara-dalàna ka izay manana fifandraisana amin'ireo solontena amin'izao fotoana izao aoka hampita aminy izao hafatra izao ary hihaino tsara ny antson'ny filoha Ravalomanana.
Efa hita ihany koa fa nanome baiko ny solontenany ny filoha Ratsiraka tsy hanatrika intsony ny dinika tokony hitohy amin'ny alatsinainy ka ny antsika indray ve no mitady hadi-doha amin'izay resaka mety tsy ho vanona sahady... dinika mandany andro hoy ny filoha izay eo ambony eo?
Araka ny hitantsika any amin'ny forum any dia miala any koa ny karazana fanimbana ny tolona tsy hisy intsony. Velombelomina fatratra ny teny hoe "rehefa tsy avotsotra ny gadra" dia amboarina amin'ny fanaovana azy ny "Savonnérie tropicale". Tena famadihana ny tolona sy familiana lalana azy tanteraka izany fidirana amin'ny faimban-javatra izany. Fandrika mivelatra ataon'ireo tsy mataho-tody sy te-hamadika ny tolon'ny mpanaja ny ara-dalàna izany.
Aoka koa hodradradradraina eny amin'ny Auditorium Ankorondrano amin'ny alatsinainy 25 mey 2009 fa tsy mila manimba zavatra izany isika, koa raha misy, na iza na iza manao izany fanimban-javatra sy fandoroana trano izany, tsy avy amintsika ireny ka raha misy ny manao izany dia sambory fa tsy ny avy eto amin'ny Auditorium mihitsy no manao izany. Tetika fanimbana ny tolona izany. Io karazana herisetra io no nampihemotra ny maro tamin'ny mpankasitraka ny TGV izay nihemotra. Koa aza fady : Melohy avy hatrany ireo rehetra mitady hanao izany fikasana mamoafady izany. Tsy amin'ny fanaovan-dratsy velively no hamaliana ny mpanao ratsy fa mampietry anao ho mpanao ratsy izany. Tsy azo entina amin'ny fo velively ny tolona fa ireny fandoroana tamin'ny 26 janoary 2009 ireny dia tetika efa maty paika hatrany amin'ny miaramila, fampielezam-peo maro, mpamonjy voina (afo), izany hoe tamim-pisainana fa tsy noho ny fo rano mandroatra velively. Adala ianao raha resy lahatra amin'izany fandoroana izany.
Ny fanentanana mivily lalana tahaka izao indrindra no nahapotika ny MDRM tamin'ny 1947, ny olona hafa araka ny fiheviny no manangana ady tsy ampy fitaovam-piadiana hamelezana ny fahavalo (Jiny) dia ny mpikambana tsotra amin'ny MDRM tsy nanao na inona na inona no nogadraina sy novonoina ary nampangaina ho izatsy sy izary. Efa mihamanatona indray ve ny fandresena vao hanao hadalàna e!
nampiana tamin'ny alahady 24 mey 2009
jentilisa, 23 mey 2009 amin'ny 23: 16